यी हुन् अहिलेसम्म विश्वकपमा ‘गोल्डेन बुट’ पाउने खेलाडी | Daily State News
यी हुन् अहिलेसम्म विश्वकपमा ‘गोल्डेन बुट’ पाउने खेलाडी
२२ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०९:४६ मा प्रकाशित - डेली स्टेट न्युज
रुस विश्वकप फुटबल २०१८ ले यतिबेला संसारलाई तरंगित बनाई रहेको छ । विश्व फुटबलमय बनेको बेला २० औं विश्वकपसम्म आईपुग्दा अहिलेसम्म कुन–कुन खेलाडीले सुनको जुत्ता पाए त ? सन् १९३० देखि सुरु भएको विश्वकप फुटबल अहिले २१ औं संस्करणसम्म आईपुगेको छ । केही दिनपछि रुसमा विश्वकप फुटबल धुमधामको साथमा सुरु हुँदैछ । विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीलाई सुनको जुत्ता दिने प्रचलन छ ।
विश्वकप फुटबलमा अहिलेसम्म कुन–कुन खेलाडीले कस्तो प्रदर्शन गर्दै सुनको जुत्ता जिते ? विश्वकप फुटबलको इतिहासमा अहिलेसम्म सुनको जुत्ता (गोल्डेन बुट) जित्ने खेलाडी यस्ता छन् ।
जेम्स रोड्रिगुएज (कोलम्बिया)
सन् २०१४ मा ब्राजिलमा सम्पन्न भएको विश्वकपको गोल्डेन बुट कोलम्बियाका जेम्स रोड्रिगुएजले पाएका थिए । आफ्नो पहिलो विश्वकपमा नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै रोड्रिगुएजले ६ गोल गरेका थिए ।
२०१४ को सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका उनले समूह चरणको सबै खेलमा गोल गरेका थिए । कोलेम्बियाले समूह चरणको पहिलो खेलमा ग्रिसलाई ३–० गोलले पराजित गर्दा रोड्रिगुएजले पनि गोल गरेका थिए । उनको विश्वकपमा पहिलो गोल त्यही थियो । त्यसपछि आईभेरीकोष्टलाई २–१ र जापानलाई ४–१ ले कोलम्बियाले पराजित गर्दा रोड्रिगुएजले समान १–१ गोल गरेका थिए ।
प्रिक्वाटरफाइनलमा उरुग्वेलाई कोलम्बियाले २–० गोलअन्तरले पराजित गर्दा रोड्रिगुएजले दुबै गोल गरेका थिए । तयस्तै, क्वाटरफाइनलमा आयोजक ब्राजिलसँग २–१ गोलअन्तरले पराजित हुदा पनि उनले १ गोल गरेका थिए ।
रुसमा हुने विश्वकप फुटबल उनको लागि दोस्रो विश्वकप हो । यो पटक पनि उनी कोलम्बियाका पहिलो रोजाईका खेलाडी हुन् । यो विश्वकपमा भने उनले कति गोल गर्न सक्ला ?
थोमस मुलर (जर्मनी)
सन् २०१० को विश्वकपमा ५ गोल गरेको जर्मनीका थोमस मुलरले गोल्डेन बुट जित्न सफल भए । हुनत उनीसँगै उरुग्वेका डिएगो फर्लान, नेदरल्याण्ड्सका वेस्ली स्नैज्डर र स्पेनका डेभिड भिल्लाले पनि समान ५–५ गोल गरेका थिए ।
मुलरले सुनको जुत्ता पाए भने डिएगो फर्लानले गोल्डेन बल पाए । दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न विश्वकपमा मुलरले सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड पनि जितेका थिए ।
मुलरले समूह चरणमा अष्ट्रेलिया विरुद्ध १ गोल गरेका थिए । त्यस्तै, प्रि–क्वाटरफाइनलमा इंग्ल्याण्डविरुद्ध दुई गोल गरेका मुलरले क्वाटरफाइनलमा अर्जेन्टिनासँग पनि १ गोल गरेका थिए । त्यस्तै, विश्वकपको तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा उरुग्वेलाई ३–२ गोलअन्तरले जर्मनीले पराजित गर्दा मुलरको पनिा १ गोल सामेल थियो ।
मिरोस्लाभ क्लोज (जर्मनी)
सन् २००६ को विश्वकपमा जर्मनीले उपाधि उचाल्न नसकेपनि गोल्डेन बुट भने जर्मनीकै मिरोस्लाभ कोजले जिते । दोस्रो पटक आयोजना गरेको विश्वकपमा जर्मनी तेस्रो स्थानमै सीमित बनेको थियो ।
तर, जर्मनीका क्लोज सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडी बने । उनले विश्वकपमा ५ गोल गर्दै सुनको जुत्ता पाएका थिए । ५ गोल गर्ने क्रममा उनले समूह चरणको खेलमा जर्मनीले कोष्टारिकालाई ४–२ गोलअन्तरले पराजित गर्दा २ गोल गरेका थिए । त्यस्तै, इक्वइडरलाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गर्दा पनि क्लोजले २ गोल गरेका थिए ।
विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा जर्मनीले अर्जेनिटनालाई पराजित गर्दा उनले एक गोल गरेका थिए ।
उनी विश्वकप फुटबलमा त्यस्ता खेलाडी पनि हुन् जसले विश्व रेकर्ड राखेका छन् । उनले विश्वकपमा १६ गोलको कीर्तिमान कायम गरेका छन् । जुन अहिलेसम्म अन्य खेलाडीले तोड्न सकेका छैनन् ।
रोनाल्डो त्यस्ता ब्राजिलियन खेलाडी हुन् जसले एकै विश्वकपमा ८ गोल गरेका छन् । अहिलेसम्म ब्राजिलका कुनै पनि खेलाडीले एकै विश्वकपमा ८ गोल गर्न सकेका छैनन् ।
सन् २००२ मा विश्वकप फुटबलको इतिहासमा पहिलो पटक एसिया महादेश जापान र दक्षिण कोरियाले गरेको विश्वकपमा रोनाल्डोले ८ गोल गरेका थिए । पाचौंपटक विश्वकपको उपाधि जित्दै ब्राजिलले ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गर्दा रोनाल्डोको पनि मुख्य भूमिका थियो ।
विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गरेका रोनाल्डोले सुनको जुत्ता पाएका थिए । ब्राजिलले समूह चरणमा टर्कीलाई २–१ गोलले पराजित गर्दा रोनाल्डोले पनि एक गोल गरेका थिए । त्यस्तै, चीनलाई ४–० गोलले पराजित गर्दा पनि रोनाल्डोको एक गोल समावेश थियो । त्यस्तै, समूह चरणमा कोष्टारिकालाई ५–२ गोलअन्तरले पराजित गर्दा रोनाल्डोले २ गोल गरेका थिए । प्रिक्वाटरफाइनलमा बेल्जियम विरुद्ध १ गोल गरेका रोनाल्डोले सेमिफाइनलमा टर्कीविरुद्ध १ गोल र फाइनलमा जर्मनीविरुद्द २ गोल गरेका थिए ।
डेभोर सुकर (क्रोसिया)
सन् १९९८ मा फ्रान्समा सम्पन्न विश्वकप फुटबलको गोल्डेन बुट क्रोसियाका डेभोर सुकरले जिते । क्रोसियन स्ट्राइकर डेभोरले विश्वकप फुटबलमा सर्वाधिक ६ गोल गर्दै गोल्डेन बुट पाएका थिए ।
उनले समूह चरणमा दुई गोल गरेका थिए । त्यस्तै, प्रिक्वाटरफाइनलमा उनकै एक गोलको मद्दतमा रोमानियालाई पराजित गर्दै क्रोसिया क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो । त्यस्तै, क्वाटरफाइनलमा जर्मनीलाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गर्दा डेभोरले एक गोल गरेका थिए ।
त्यस्तै, सेमिफाइनलमा फ्रान्ससँग २–१ गोलअन्तरलेले पराजित हुदा र विश्वकपको तेस्रो स्थानको लागि नेदरल्याण्ड्सलाई २–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दा डेभोरले दुबै खेलमा समान १–१ गोल गरेका थिए ।
ओलेग सालेंको (रुस), हृस्टो स्टोइक्कोभ (बुल्गेरिया)
सन् १९९४ मा भएको विश्वकप फुटबलको गोल्डेन बुट भने दुई जना खेलाडीले पाएका थिए । विश्वकपमा समान ६–६ गोल गरेका रुसका सालंको र बुल्गेरियाका हृस्टो स्टोइकोभले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै गोल्डेन बुट जितेका थिए ।
सालेंकोले क्यामरुन विरुद्ध एकै खेलमा ५ गोल गरेका थिए । त्यस्तै उनले स्वीडेन विरुद्ध १ गोल गरेका थिए । यता, स्टोइक्कोभले समूह चरणमा ३ गोल गरेका थिए भने प्रिक्वाटरफाइनलमा मेक्सिको, क्वाटरफाइनलमा जर्मनी र सेमिफाइनलमा इटाली विरुद्ध तीन गोल गरेका थिए ।
साल्भाटोर स्चिलाची (इटाली)
सन् १९९० को विश्वकप फुटबल जर्मनीले जित्दा सर्वाधिक गोलकर्ता भने इटालीका साल्भाटोर स्चिलाची भएका थिए । उनले सर्वाधिक ६ गोल गर्दै सुनको जुत्ता पाएका थिए ।
इटालीले आयोजना गरेको विश्वकपमा समूह चरणको पहिलो खेलमा नै अष्ट्रिया विरुद्ध साल्भाटोरले गोल गरेका थिए । त्यस्तै, समूह चरणको खेलमा उनले चेकोस्लोभाकिया विरुद्ध १ गोल गरेका थिए ।
उरुग्वेलाई २–० गोलअन्तरले पराजित गर्दा साल्भाटोरले एक गोल गरेका थिए । त्यस्तै, क्वाटरफाइनलमा रिपब्लिक अफ आयरल्याण्ड विरुद्ध गोल गर्दै इटालीलाई सेमिफाइनलमा पु¥याएका थिए । सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिनासँग पराजित भएपनि उनले एक गोल गरेका थिए । त्यस्तै, उनले विश्वकपको तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा इंग्ल्याण्डविरुद्ध पनि १ गोल गरेका थिए ।
ग्यारी लिनकर (इंग्ल्याण्ड)
ग्यारी लिनकरले सन् १९८६ को विश्वकप फुटबलको सुनको जुत्ता जितेका थिए । उनले मेक्सिकोमा भएको विश्वकपमा सर्वाधिक ६ गोल गर्दै गोल्डेन बुट जिते ।
समूह चरणको अन्तिम खेलमा पोल्याण्ड विरुद्ध ह्याट्रिक गोल गर्दै इंग्ल्याण्डलाई लिनकरले जिताएका थिए । त्यस्तै पाराग्वे विरुद्ध २ गोल गर्दै क्वाटरफाइनलमा पु¥याएका लिनकरले अर्जेन्टिनासँग २–१ गोलले क्वाटरफाइनलमा पराजित हुदा पनि १ गोल गरेका थिए ।
पाओलो रोसी (इटाली)
सन् १९८२ मा स्पेनमा सम्पन्न विश्वकप फुटबलको उपाधि इटालीले उचाल्दा सर्वाधिक गोलकर्ता पनि इटालीकै पाओलो रोसी बने । उनले सर्वाधिक ६ गोल गर्दै सुनको जुत्ता प्राप्त गरे ।
ब्राजिल विरुद्ध ह्याट्रिक गोल गर्दै सेमिफाइनलसम्म इटालीलाई पु¥याएका रोसीले सेमिफाइनलमा पोल्याण्ड विरुद्ध २ गोल गरेका थिए । त्यस्तै, जर्मनीलाई फाइनलमा पराजित गर्दै इटालीले विश्वकपको ट्रफि उचाल्दा रोसीले महत्वपूर्ण एक गोल गरेका थिए ।
मारियो क्याम्पेस (अर्जेन्टिना)
सन् १९७८ मा अर्जेन्टिनाले आफ्नै आयोजनामा पहिलो पटक विश्वकप फुटबलको उपाधि उचालेको थियो । यो विश्वकपमा आर्जेन्टिनालाई उपाधि दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका मारियो क्याम्पेसले सर्वाधिक ६ गोल गरे ।
सर्वाधिक गोल गरेका क्याम्पेसले पोल्याण्ड, पेरु र नेदरल्याण्डसँग समान २–२ गरी कुल ६ गोल गरेका थिए ।
ग्रेजगर्ज लाटो (पोल्याण्ड)
ग्रेजगर्ज लाटो पोल्याण्डका त्यस्ता खेलाडी हुन्, जसले सन् १९७४ को विश्वकपमा सर्वाधिक ७ गोल गरेका थिए । उनले पोल्याण्डलाई विश्वकपको तेस्रो स्थान दिलाउन ठूलो भूमिका खेले । समूह चरणमा अर्जेन्टिना र हाइटी विरुद्ध समान २–२ गोल गर्दै कुल ४ गोल गरेका थिए ।
त्यस्तै, उनले दोस्रो राउण्डमा २ गोल गरेका लाटोले तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा ब्राजिल विरुद्ध एक गोल गरेका थिए ।
गेर्ड मुलर (जर्मनी)
गेर्ड मुलर त्यस्ता विश्व कीर्तिमानी खेलाडी हुन् जसले सन् १९७० को विश्वकप फुटबलमा दुई ह्याट्रिक गोल गरे । उनले यो विश्वकपमा सर्वाधि १० गोल गर्दै गोल्डेन बुट प्राप्त गरेका थिए ।
मेक्सिकोमा भएको विश्वकप ब्राजिलले तेस्रो पटक जितेपनि जर्मनीका गेर्ड मुलरको चर्चा सर्वत्र छाएको थियो । उनले बुल्गेरिया र पेरु विरुद्ध ह्याट्रिक गोल गरेका थिए ।
त्यस्तै, समूह चरणकै मोरोक्को विरुद्धको खेलमा एक गोल गर्दै समूह चरणमै ७ गोल गरेका थिए । त्यस्तै क्वाटरफाइनलमा इंग्ल्याण्ड विरुद्ध जर्मनीले ३–२ गोलले पराजित गर्दा उनको पनि एक गोल सामेल थियो । त्यस्त्ै, सेमिफाइनलमा इटालीसँग ४–३ गोलअन्तरले पराजित हुदा गेर्ड मुलरले २ गोल गरेका थिए ।
सन् १९६६ को विश्वकपमा पोर्चुगाली खेलाडी युसेवियोले सर्वाधिक ९ गोल गरेका थिए । विश्वकपको उपाधि आयोजक राष्ट्र इंग्ल्याण्डले जितेपनि युसेवियो त्यसबेला सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका थिए । उनले समूह चरणमा तीन गोल गरेका थिए । त्यस्तै, क्वाटरफाइनलमा उत्तर कोरियालाई पोर्चुगलले ५–३ गोलअन्तरले पराजित गर्द युसेवियाले ह्याट्रिकसहित ४ गोल गरेका थिए ।
त्यस्तै, सेमिफाइनलमा इंग्ल्याण्डसँग २–१ गोलअन्तरले पराजित हुदा पनि उनले १ गोल गरेका थिए । त्यस्तै, विश्वकपको तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा सोभियत युनियन विरुद्ध पनि एक गोल गरेका थिए ।
फ्लोरियन अल्बर्ट (हंगेरी), ग्यारिन्चा (ब्राजिल), भ्यालेन्टिन आईभानोभ (सोभियत युनियन) ड्राजन जेर्कोभिक (युगोस्लाभिया), लियोनल सान्चेज –चिली र भाभा (ब्राजिल)
सन् १९६२ को विश्वकपमा ६ जना खेलाडीले सर्वाधिक ४ गोल गरेका थिए । फ्लोरियन अल्बर्ट (हंगेरी), ग्यारिन्चा (ब्राजिल), भ्यालेन्टिन आईभानोभ (सोभियत युनियन) ड्राजन जेर्कोभिक (युगोस्लाभिया), लियोनल सान्चेज (चिली) र भाभा (ब्राजिल) का खेलाडीले समान ४–४ गोल गरेका थिए ।
जस्ट फन्टाइन (फ्रान्स)
फ्रान्सेली स्ट्राइकर फन्टाइन त्यस्ता खेलाडी हुन् जसले एकै विश्वकपमा १३ गोल गरेका छन् । सन् १९५८ को विश्वकपमा फन्टाइनले १३ गोलको कीर्तिमान बनाए थिए । स्वीडेनले पहिलो पटक आयोजना गरेको विश्वकपको उपाधि ब्राजिल जित्न सफल भयो । तर, सर्वाधिक गोलकर्ता बने फन्टाइन । उनको उत्कृष्ट प्रदर्शनले सबैको मन जितेको थियो ।
समूह चरणमा पाराग्वे विरुद्ध ह्याट्रिक गोल गरेका थिए । त्यस्तै, उनले विश्वकपको तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा जर्मनी विरुद्ध ह्याट्रिकसहित ४ गोल गरेका थिए ।
सान्डोर कोक्सिस् (हंगेरी)
हंगेरीका स्यान्डोर कोक्सिस त्यस्ता खेलाडी हुन् जसले आफ्नो देशको नेतृत्व गर्दै सन् १९५४ को विश्वकपमा सर्वाधिक ११ गोल गरेका थिए ।
दक्षिण कोरिया विरुद्ध सान्डोर कोक्सिस्ले समूह चरणको पहिलो खेलमा नै ह्याट्रिक गोल गरेका थिए । उनले समूह चरणको खेलमा जर्मनी विरुद्ध ह्याट्रिक सहित ४ गोल गरेका थिए । जुन खेलमा हंगेरीले जर्मनीलाई ८–३ गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो ।
त्यस्तै क्वाटरफाइनलमा ब्राजिल विरुद्ध हंगेरीले ४–२ गोलअन्तरले पराजित गर्दा दुई गोल कोक्सिस्को थियो । त्यस्तै, सेमिफाइनलमा पराग्वेलाई ४–२ गोलअन्तरले पराजित गर्दा पनि कोक्सिसले दुई गोल गरेका थिए ।
सन् १९५० मा ब्राजिलमा भएको विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ता बने ब्राजिलियन फरवार्ड एडमिर । उनले ८ गोल गरेका थिए ।
समूह चरणमा मेक्सिको विरुद्ध २ गोल गरेका एडमिरले युगोस्लाभिया विरुद्ध १ गोल गरेका थिए । त्यस्तै, फाइनल राउण्डमा ब्राजिलले स्वीडेनलाई ७–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दा एडमिरले ह्याट्रिकसहित ४ गोल गरेका थिए । त्यस्तै, स्पेन विरुद्ध पनि उनले एक गोल गरेका थिए ।
सन् १९३८ मा फ्रान्समा भएको विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका थिए ब्राजिलका लेओनिडास । उनले यो विश्वकपमा ७ गोल गर्दै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेका थिए ।
पोल्याण्ड विरुद्धको खेलमा ब्राजिलले ६–५ गोलअन्तरले पराजित गर्दा लओनिडासले ह्याट्रिक गोल गरेका थिए । उनले क्वाटरफाइनलको खेलमा चेकोस्लोभाकिया विरुद्ध १ गोल गरेका थिए भने रिप्ले खेलमा पुनः चेकोस्लोभाकिया विरुद्ध नै गोल गरेका थिए ।
त्यस्तै, विश्वकपको तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा ब्राजिलले स्वीडेनलाई ४–२ गोलअन्तरले पराजित गर्दा लेओनिडासले २ गोल गरेका थिए ।
ओल्ड्रिच नेजेड्ली (चेकोस्लोभाकिया)
सन् १९३४ मा स्टालीमा सम्पन्न विश्वकपमा चेकोस्लोभाकियाका ओल्ड्रिच नेजेड्लीले सर्वाधिक ५ गोल गरेका थिए । दोस्रो विश्वकपमा उपविजेता हुदा चेकोस्लोभाकियालाई महत्वपूर्ण योगदान दिएका आल्ड्रिचले ह्याट्रिक गोल पनि गरेका थिए ।
सेमिफाइनल खेलमा जर्मनी विरुद्ध आल्ड्रिचले ह्याट्रिक गोल गरेका थिए । त्यस्तै, उनले समू्ह चरणको खेलमा रोमानियासँग र क्वाटरफाइनल खेलमा स्वीट्जरल्याण्ड विरुद्ध गरी २ गोलका थिए ।
गुइर्लिमो स्टेविल (अर्जेन्टिना)
पहिलो विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी हुन् अर्जेन्टिनाका फरवार्ड गुइर्लिमो स्टेविल । उनले सन् १९३० को पहिलो विश्वकपमा ८ गोल गरेका थिए ।
समूह चरणको खेलमा गुएर्लिमोले मेक्सिको विरुद्ध ह्याट्रिक गोल गरे भने समूह चरणकै अर्को खेलमा चिली विरुद्ध २ गोल गरेका थिए । त्यस्तै, सेमिफाइनलमा अमेरिकालाई ६–१ गोलअन्तरले अर्जेन्टिना जित्दा गुइर्लिमोले दुई र फाइनलमा उरुग्वे विरुद्ध हारेपनि १ गोल गरेका थिए ।